Fiilo Daawaha Lacagta ah, Rivet Contact, Tilmaamaha Xiriirka - ZHJ
ZHJ waa shirkad qorshayn toosan toos ah hi-tech oo ku jirta safka waxyaabaha lala xiriirayo.
Ku dadaal inaad ka farxiso macaamiisheenna
SHZHJ waxay ka soo saari kartaa silig daawaha iyo qalinka, sidaa darteed waxaan hagaajin karnaa oo aan u habeyn karnaa nidaamkayaga qalabka sida ku xusan shuruudaha macaamiisha. SHZHJ 100% hubi badeecadaha kahor intaan laga bixin warshaddeena, waxaanan haysannaa shahaado tijaabo ah oo loogu talagalay shixnad kasta.
Isbahaysi farsamo oo gaar ah
Adeegyadeennu waxay u dhexeeyaan dib-u-warshadaynta birta qaaliga ah iyada oo loo marayo tiknoolajiyada shaabbadeedka illaa shirarka caagga-caaga ah Run u hal-ku-dhigga ah, "Hal weji macmiilka", waxaan yareyneynaa is-dhexgalka alaab-qeybiyeyaasha waxaanna u abuureynaa xalal tayo sare leh iyo ganacsi ku habboon macaamiisheenna.
Waxyaabaha heer sare ah ogaanshaha
Meesha ay birta iyo korontadu isku yimaadaan, waxaan u fidinaa macaamiisheenna khibrad gaar ah oo ku saabsan qalabka, dusha sare iyo sii socodsiintooda. Tani waa sida xalka loola xiriiro ee shirkadda SHZHJ loo abuuray in ka badan 10 sano.
KU SAABSAN SHIRKAD
Shanghai ZHJ Technologies Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2007, Laga bilaabo bilowgii: SHZHJ, DIIRADA MAADADA LAGA SOO XIRIIRO! ZHJ waa shirkad qorshayn toosan toos ah hi-tech oo ku jirta safka waxyaabaha lala xiriirayo. ZHJ waxaa ka go'an isticmaalka sayniska casriga ah iyo teknolojiyada si loo xaliyo dhibaatada qalabka xiriirka, waxyaabaha ugu waaweyn ee ZHJ waxaa ka mid ah lix taxane ah silig daawaha lacag ah, rivet xiriir, caarada xiriirka, badhanka xiriirka, la xiriir Golaha iyo Tungsten Contact, iyadoo loo marayo khibradeena ku jirta biraha qaaliga ah ka baaraandegidda in ka badan 20 sano iyo aqoonteenna ballaadhan ee xamuullada korantada ee hadda socda. Waxaan nahay bahwadaagta xulashada shirkado badan oo warshado kaladuwan leh iyo ku dhowaad dhammaan gobollada suuqyada.